कोरोनामा देखिएको दुषित राजनीति – Yug Aahwan Daily
कोरोनामा देखिएको दुषित राजनीति
युग संवाददाता । ८ बैशाख २०७७, सोमबार १२:२७ मा प्रकाशित
मदन भण्डारी फाउण्डेन
महामारीमा राजनीति हुन्छ कि हुदैन ? दुखको कुरा यो हुन्छ र सँधै हुन्छ । तर सामान्य अवस्थामा भन्दा यस्तो संकटको अवस्थामा राजनीति अलि जटिल र बुझन कठिन प्रकारको हुन्छ । सामान्य अवस्थामा उठाइएका इस्युहरुको वजन र उद्देश्य छर्लङ्ग हुँदा मान्छेहरु भ्रममा पर्ने सम्भावना कम हुन्छ, माहामारीमा भने भ्रमको जालो यति जटिल हुन्छ की बडे बडेले समेत भेऊ नै पाउदैनन ।यो अन्तरास्ट्रिय राजनीतिमा पनि हुन्छ । उदाहरणको लागि कोरोनाको उत्पत्तिवाट शुरुभएको अमेरिका चिनको हालैको शितयुद्धलाई लिन सकिन्छ । युद्ध र महामारीका बेलामा उत्पन्न भएका भ्रमहरु र यसले निर्धारण गरेका राजनीतिहरुको भयङ्कर दुष्परिणामका सैयो घटनाहरु इतिहासमा दर्ज भएका छन ।
मुलकमा यतिखेर हामी कोरोनाको संन्त्रासका विचमा बाँचिरहेका छौ ।
यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा भएका पहल र यसका विरुद्धमा कुत्सित राजनीति प्रवेश भएको छ कि छैन ? आजको सन्दर्भमा यो विषय महत्वपुर्ण मात्र होइन, छलफलगर्न ढिला समेत भैसकेको सन्दर्भ हो । केहि प्रसङ्गहरु उल्लेख गरौ, जस्तै चिनको वुहानमा कोरोना महामारी फैलिएपछि त्यँहा फसेका नेपाली विद्यार्थीहरुलाई के गर्ने भनेर नेपाल सरकार छलफलगर्दै थियो । छलफल निष्कर्षमा पुगेकै थिएन, उद्धारमा ढिलो भयो भनेर करिव एक हप्ता जति नेपाल सरकारको विरुद्धमा नेपाली मिडिया र वुद्धिजिविहरु खनिए । ल्याउने र खरिपाटीमा राख्ने सरकारले निर्णय गरेपछि मानववस्तीको विचमा राख्नुहुदैन भनेर पत्रपत्रिका र संसदमा समेत आवाज उठाइयो । खरीपाटी वरिपरिका बासिन्दाहरुलाई जुलुश निकाल्न लगाइयो, त्यँहाका बासिन्दाहरु घर छोडेर हिडेको प्रचार गरियो । तत्पश्चात स्वास्थमन्त्रीले विदेशवाट आएकाहरुलाई घरमै सेल्फ क्वारेन्टाईनमा बस्न आह्वान गर्नुभयो । आफै क्वारेन्टाइनमा बस्ने हो भने सरकारको के काम ? भनेर स्वास्थमन्त्रीको धज्जी उडाइयो ।
अस्पतालमा प्रयाप्त स्वास्थ उपकरणको अभाव भनेर करिव २ हप्ताजति टेलिभिजनहरुले काम पाए । सरकारले छिटो निर्णय गरेर स्वास्थ सामाग्रीहरु भित्र्यायो,त्यसमा भ्रष्टाचार भयो भनेर फेरी कोकोहोलो मच्चाइयो, जुन अझै जारी छ । त्यतिखेर स्वास्थ सामाग्री सस्तोमा ल्याइदिने अनेकौ नायकहरु निस्कीए । ती तथाकथित नायकहरुलाई टेलिभिजनहरुमा बोल्न लगाइयो । कबुल गरेको ठेकेदारले सामान ल्याउन सकेन, सरकारले ठेक्का रद्ध गरि पुन बोलपत्र आहवान गर्यो, सस्तोमा ल्याइदिने ती महानायक व्यापारीहरु दृश्यवाट गायव भए । सरकारले (जि टु जि) मार्फत खरिदगर्ने र यसको सहजीकरणका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा लगायो । यसैका सन्दर्भमा भएको रुवावासी,कोकोहोलो र वान्ताले नेपाली मिडियाहरुलाई कति दुषित गरियो, त्यसको लेखाजोखा नै छैन । सरकार लकडाउनको वारेमा निर्णय लिन छलफल गर्दै थियो, लकडाउन नभएका देशहरुको उदाहरण प्रस्तुतगर्न लाज मानिएन । यरोपको महामारी र नेपालभित्र नै छिटफट संक्रमितहरु देखापरेपछि सरकारले लकडाउनको निर्णय लियो । फेरि ढिलो भयो भनेर तिनिहरुले नै भने जवकी भारतभन्दा पहिला नेपालले लकडाउनको घोषणा गरेको थियो ।
भ्रमको खेतिगर्नेहरु अहिले मुख्यरुपमा दुइटा कुरा जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन, पहिलो भारत लगाएत विदेशमा भएका लाखौ नेपालीहरुलाई नेपाल तुरुन्त नेपाल ल्याउनुपर्छ, दोस्रो राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका मजदुरहरुलाई लोकडाउन तोडरे पनि घर जान दिनुपर्दछ । त्यतिमात्र होइन, मान्छेहरुलाई हिडेर घर जान प्रेरित गरिदैछ । राजमार्गहरुमा पैदल हिडिरहेकाहरुको भिडियो र फोटाहरु प्रसारण गरेर स्थीतिलाई भयावह बनाइदैछ । उनीहरुलाई यसरी प्रस्तुत गरिदैछ कि मानौ ती मान्छेहरु झोला बोकेर मुलुकका लागि लडन निस्केका हुन । यसैविचमा प्रधानमन्त्रीले राजमार्गहरुमा हिडिरहेकाहरुलाई स्थानिय र प्रदेश सरकारहरुले घरसम्म पुर्याउन आवश्यक पहलगर्न निर्देशन गर्नुभयो, तदनुकुल कार्यान्वयन हुदैछ । तर भ्रमका खेतिगर्नेहरु थाकेका छैनन, बसमा ट्याक्टरमा र ट्रकहरुमा कोचेर मान्छेहरु पठाइदैछ भनेर प्रचार शुरु भएको देख्न पाइन्छ ।
राष्ट्रिय विपत्तिको सामनागर्न तयारी गरिरहेको राज्य र सरकारका विरुद्धमा अफवाहहरु फैलाएर किन मान्छेहरु भडकाइदैछ ? किन सरकारलाई कमजोर पार्न खोजिदैछ ? कुरो प्रष्टै छ ,यहि हो राजनीति । नेपाली जनताको कोरोनासंगको लडाईमा पर्याप्त राजनीति गरिएको छ, भएको छ । यो कुत्सीत राजनीतिको उद्धेश्य चाँहि के होला ? यो पनि प्रष्टै छ, सत्ताप्राप्ति । संसदमा करिव दुई तिहाइ बहुमत भएको नेकपाको सरकार वैधानिक हिसावले नै विस्थापित हुने सम्भावना छैन । तसर्थ जुनजुन शक्तिहरु यो सरकारको विपक्षमा छन, उनिहरुका लागि कोरोना एउटा सम्भावनाकोरुपमा आएको छ । तसर्थ उनिहरु मुलुकमा कोरोना फैलियोस भन्ने चाहान्छन । यो आरोप होइन, मान्छेको रगतहरुसङ्ग सत्ताको साटफेर भएको थुप्रै उदाहरण नेपाली राजनीतिमै पाइन्छ । त्यसकारण नै कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको प्रयाशमा उनिहरु भ्रमको खेतिगर्ने कर्ममा आफलाई उभ्याउछन । स्वास्थ उपकरणको अभावमा डाक्टरले कसरी काम गर्ने ? भनेर डाक्टर उचाल्छन । सेनालाई विपत्तीमा प्रयोगगर्दा सेनाको यो काम हो र ? भनेर कोकोहोलो मच्चाउछन । लकडाउनगर्दा जनताले खान पाएनन भनेर हल्ला गर्छन । जनतालाई राहत बाडदा भ्रष्टाचार भयो भनेर भन्छन । लकडाउनका विरुद्धमा जनतालाई राजमार्ग हिडाउन प्रोत्साहित गर्छन । विदेशमा रहेका सम्र्पुण नेपालीहरुलाई तत्काल नेपाल फर्काउनु पर्दछ भनेर आवाज उठाउनेहरु पनि यीनीहरु नै हुन । उनीहरुको एकमात्र उद्देश्य भनेको भाँडभैलो मच्चाएर कोरोनाको व्यापक संक्रमण फैलाउने र सरकारले स्थीति सम्हाल्न सकेन भनेर राजनैतिक अभिष्ट पुरागर्ने नै हो ।यति करा भैसकेपछि यो भ्रमको खेतिका पछाडि कुन शक्ति छ त ? भनेर प्रष्ट हुन जरुरी हुन्छ ।
देब्रे दाहिने दुवैतर्फका छन । तथापि यसका सन्र्दभमा खासगरि दुई तिन थरि शक्ति र प्रवृत्ति बढि क्रियाशिल देखिन्छन । पहिलो शक्ति त राजावादीहरु नै हुन । उनिहरुको पकड मुलधारको मिडियाहरुमा छैन । तसर्थ उनिहरु युट्यव र सामाजिक सन्जालका माध्यमहरुवाट भ्रमको खेति गरिरहेका छन । औपचारिक विपक्ष आफ्नो अभियान मुलधारको मिडियामार्फत गरिरहेका भेटिन्छन । सर्वदलिय सरकार, मध्यावधी निर्वाचन जस्ता स्वरहरु नविकेपछि लकडाउन तोडेर राजमार्गमा हिडनेहरुको प्रचारगर्दै यो अभियानमा सामेल छन । त्यसवाहेक सर्वदलिय संयन्त्रको माग पनि सरकारलाई बलियो बनाउने तर्क होइन । यसविचमा प्रधानमन्त्री ठिक तर उनको सचिवालय, सल्लाहकार र मन्त्रीहरु बेठिक भन्ने प्रवृत्ति पनि विस्तारै हुर्किरहेको पाइन्छ ।
यी सबै पात्र र प्रवृत्तिको अभियान एउटै देखिएपनि उद्देश्य भने फरक छ । राजावादीहरुले कोरोनालाई भयावह बनाएर प्रतिगमनतर्फको यात्रा प्रारम्भ गरेका छन् । औपचारिक विपक्ष तत्कालै सर्वदलिय सरकारमार्फत सत्तारोहणको दाउमा होला । कोही प्रधानमन्त्रीलाई मात्र असफल पार्ने ध्याउन्नमा छन भने कोही प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सल्लाहकार र मन्त्रीका विरुद्धमा अभियान छेडेर प्रधानमन्त्रीलाई घुर्काउने र खाने दाँउमा पनि होलान । तथापि जे भएपनि महामारीको सन्निकटमा रहेको वेलामा कुनैपनि प्रकारको कुत्सित राजनिति सैह्य हुँदैन । यतिखेर सरकार र राज्यलाई बलियो बनाएर मात्र मुलुकलाई महामारीवाट जोगाउन सकिन्छ । लोकतन्त्रवादीहरुका लागि यो परिक्षाको घडी पनि हो । तसर्थ यसतर्फ सवै सचेत हुन जरुरी छ, अन्यथा यो विपत्तिवाट जोगिन हामीले ठुलो मुल्य चकाउनपर्नेमा दुई मत छैन । (नेकपा नेता बर्दिया निवासी हुन)